Ukuguqulwa Ebhokisini | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 8, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 7, 2013 Douglas Karr
Ukuguqulwa Ebhokisini kuyinhlanganisela yekhasi lokufika, ukuphathwa kwefomu nedatha, impendulo ezenzakalelayo ye-imeyili, kanye analytics kusixazululo esisodwa. Ukuguqulwa Ebhokisini kukusiza ukuthi uguqule noma yiliphi ikhasi lewebhu libe isu lokuguqula. Layisha okuqukethwe okuphoqayo kumaseva ethu aphephile futhi sizokhiqiza ikhodi yefomu ongayinamathisela kalula kokuthunyelwe kwebhulogi, amakhasi e-Facebook, amawebhusayithi, amakhasi okufika, njll.
Izici ezingeziwe ze- Ukuguqulwa Ebhokisini zihlanganisa:
Khomba Izilaleli Zakho - Hlanganisa imininingwane ngezithameli zakho namafomu azo okuqoqwa kwewebhu, akhiwe nguwe, enzelwe wena.
Yabelana ngokuqukethwe kwakho - Nikeza okuqukethwe okungalandwa njenge-PDF, i-JPG, i-PNG, i-EPS, i-TIF, i-MP3, i-MP4, i-MV3, i-XLS, i-DOC, AMAKHASI, i-PPT, nokuningi, ukukhuthaza ukungena.
Landelela Impumelelo - Hlola impumelelo yomkhankaso ngokusebenzisa izibalo zokulanda nokungena. Thuthukisa impumelelo yomkhankaso ngokuhlolwa kwe-AB.
Ukufanelekela ukuhola - Ama-imeyili amabi, ogaxekile, nama-web-bots ayacasula. Sebenzisa iziqu zabo ukuqinisekisa ukuthi idatha oyilanda noma oyithuthayo iyiqiniso.
CRM & ESP Ukuhlanganiswa - Ukuhlanganiswa kokuchofoza okukodwa nge-CRM kanye nama-ESP adumile kwenza imininingwane yababhalisile ibe ngcezu lekhekhe. Idatha nayo i-CSV isilungile.
ILoopfuse: I-B2B Marketing Automation yama-SMB